Ku xigeenkii hore ee Agaasimaha guud ee NYS iyo guddomiyihii hore ee gudiga qandarasyada wasarada dowlad wadaajinta oo dacwad lagu soo oogayo – The Voice of Northeastern Kenya
Ku xigeenkii hore ee Agaasimaha guud ee NYS iyo guddomiyihii hore ee gudiga qandarasyada wasarada dowlad wadaajinta oo dacwad lagu soo oogayo
Star FM November 13, 2016
Labo sarkaal sar sare oo lala xiriirinayo fadeexadii lacagaha looga lunsaday waaxda qaran ee adeega dhalinyarada ee NYS ayaa maalinta arbacada lagu wadaa in maxkamada la hoegeeyo si loo dhageysto eedeymaha loo soo jeediyay.
Agaasimaha waaxda dacwad oogista Keriako Tobiko ayaa amar ku bixiyay in maxkamada loo gudbiyo dacwad ka dhan ah Adan Harakhe oo ah ku xigeenkii hore ee agaasimaga guud ee NYS iyo Xassan Nuur Xassan.
Labadan sarkaal ayaa lala xiriirinaya isdabanarin ku saabsan arrimaha soo iibinta oo lagu bixiyay qandaraska lagu qeybiyay qalab loogu talagalay tababarada oo la sheegay in ay ku baxday lacag dhan 47.6 milyan oo shilin.
Mr Tobiko oo warqad u qoray gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC aya sheegay in ay jirto cadeeyn dhameystiran oo dacwad loogu soo oogi karo Mr Harakhe maadama sida warqada ku qoran oo maamulka si qaldan u adeegsaday.
Qandaraskan ayaa la siiyay shirkad lagu magcaabo Blue Star Enterprises.
Dhanka kale Mr Harakhe ayaa waxaa maxkamada lala hor geyn doona xoghayihii hore ee wasaarada dowlad wadajinta Peter Mangiti.
Xoghayahay ayaa loo heysta in uu dhaqangeliyay qandaraaskan oo uu isla maalintaas magacaabay gudi qiimeyn ku sameeyo.
Mr Harakhe ayaa horay la sheegay in uu ka marqaati kici doono fadeedaxan maadama baaritaanadii hor dhaca ahaa lagu ogaaday in uu ahaa qofkii ugu horeyay ee shaaca ka qaaday in ay xatooyo ay jirto.
Warqada uu 4-tii bishan Novembar qoray agaasimaha waaxda dacwad oogista ayuu amar ku bixiyay in Mr Harakhe iyo sarakiil kale ay qoraan fariimo hor leh maadamada ay ka mid yihiin eedeysanyaasha.
← Wasiirada arrimaha dibada Amina Maxamad oo sheegtay in ay tahay shaqsiga ugu wanagsan ee horumar gaarsiin karo midowga AU-da
Musharaxdii xisbiga dimuqaradiga ee Mareykanka Hillary Clinton oo guul daradeeda ku eedeysay agaasimaha waaxda FBI →